ဦးဝင်းအောင်သည် MAEX ၏ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး မြန်မာသီလဝါ အက် (စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘလစ် လိမီတက်(Myanmar Thilawa SEZ Public Holdings Company) ကို တည်ထောင်သူ ဥက္ကဌ လည်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါကုမ္ပဏီမှာဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကိုတည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီတွင်အစုရှယ်ယာအများဆုံးထည့်ဝင်ထားသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်၎င်းသည် Golden Land East Asia Public Co., Ltd ရွှေနိုင်ငံအရှေ့အာရှ ဖွံ.ဖြိုး တိုးတက်ရေးလီမိတက်၏ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ ကမကထပြုသူများအနက် တစ်ဦးဖြစ်၍အထွေထွေကုန်သွယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ အထူးသဖြင့် မဟာမဲခေါင်ဒေသ (“GMS” = Great Meakong Sub Region)တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများ ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့ ယူဆောင်လာခဲ့ပါသည်။သူသည်(Dagon Group of Companies) ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုကို ၁၉၉၀ပြည်နှစ် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဥက္ကဌအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစတင်ကာဒဂုန်ကုမ္ပဏီများအိမ်ခြံမြေတည်ဆောက်ဖွံ.ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုကလူနေအိမ်ယာနှင့်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေး၊ ပေါင်းစည်းစံပြလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တန်ဘိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ပစ္စည်းထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ မော်တော်ယာဉ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး၊ လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချေရေးနှင့် အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ဦးဝင်းအောင်သည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး အသင်းချုပ်၏ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် (NESAC = National Economic and Social Advisory Council) အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီနှင့် (UN –ESCAP Advisory Council) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကော်မရှင် အကြံပေးကောင်စီ တို.၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ အထိ (ABAC = ASEAN Business Advisory Council) အာစီယံ စီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီ ဥက္ကဌတာဝန် နှင့် ၂၀၀၂ မှ ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၄ အထိ (GMS-BF = Greater Mekong Sub – region Business Forum) မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲစီးပွားရေးဖိုရမ်ဥက္ကဌတာဝန်တို့ကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်အဆိုပါအဖွဲ့များ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
U Win Aung is MAEX Chairman. He is also theFoundingChairman of Myanmar Thilawa SEZ Public Holdings Company, which isaholding company with the largest shareholding of the development company that develops and constructs Thilawa Special Economic Zone.
He is also the Chairman of the Golden Land East Asia Public Co Ltd., which is also one of the Promoters and isapublic company that is engaged in general trading. He brings to our Company many years of experience in business development in Myanmar and Southeast Asia, particularly in the Great Mekong Sub Region (“GMS”).
He founded and continues as the Chairman of the Dagon Group of Companies since its establishment in 1990. Since 1993, Dagon Group of Companies has successfully implemented property development projects. Dagon Group of Companies engages in wide range of businesses in residential and commercial development, hotel development, integrated agricultural development, value added food industry, logistics and distribution, automobile distribution, petroleum distribution, and in other business sectors.
U Win Aung was elected and served as President of UMFCCI from 2011 to 2016. He is also one of the members of National Economic and Social Advisory Council (NESAC) & UN-ESCAP Advisory Council, Chairman of ASEAN Business Advisory Council (ABAC) from 2013 to 2014 & Chairman of Greater Mekong Sub-region Business Forum (GMS-BF) in the period of 2002 – 2004 and 2012 – 2014.
ဦးစစ်လွင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သည်။ ဦးစစ်လွင်တွင် ရွှေထည်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မိုးမခရွေနှင့် ရတနာလုပ်ငန်းဟုခေါ်သော ရွှေနှင့်ရတနာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ကာလက်က္ကားရောင်းချခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည့် ရွှေေဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်နေသူဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ရွှေနှင့်စိန်ထည်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုအခြေပြုပြီး နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်ကို တည်ဆောက်လျက် လက်က္ကားရောင်းဝယ်ခြင်းကို စီမံဆောင်ရွက်နေသည်။ သူသည် ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေကုန်သည်အသင်းအဖွဲ့တွင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိရာ သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဗဟုသုတသည် အသင်းကို အနာဂါတ်မူဝါဒကောင်းများချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အထောက် အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
သူသည် (Willow Myanmar Investment Co., Ltd) ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအပြင် မြန်မာသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံ ဦးပိုင်များကဲ့သို့ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တို.တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ထားပါသည်။
သူသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဘောဂဗေဒ ပညာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
U Sit Lwin is the Vice Chairman of our Company. U Sit Lwin has extensive experience in the gold commodity trading sector. In 1996, he has establishedagold jewelry business called Moe Ma Kha Gold & Jewelry which isamarket leader specializing in manufacturing and wholesaling of gold jewelry. With over 20 years of expertise in gold and diamond jewelry and managing nationwide distribution network for wholesale of gold and diamond jewelry. He also serves as an influential committee member of Yangon Gold Association where his technical knowledge in the field helps steer the association towards better future policies relating to the industry.
He is also the founder of Willow Myanmar Investment Co., Ltd which has strategic holdings in various businesses that range from hotel and tourism, commodity trading as well asinfrastructure businesses such as Myanmar Thilawa SEZ holdings.
In 1982, he graduated withaBachelor of Economics Degree from the Yangon Institute of Economics.
ဦးအောင်ဇော်ဦးသည် ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သည်။ သူသည်အောင်နိုင် သစ္စာကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော (Golden Land Express Limited) စားဆီသန့်စင်ရေးနှင့် ရွှေတူးဖော်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းနှင့် ဖြေဖျော်မှုတို့ပါဝင်သည်။ သူသည် (Golden Land East Asia Development Ltd) ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် (UMFCCI = Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
U AungZawOo is the Vice Chairman. He is currently holding position as Chairman of AungNaingThitsar Group of Companies; the company is exposed to several business units which include the logistic business of Golden Land Express Limited, oil refinery and gold mining, car showroom and entertainment. He is also the Director of Golden Land East Asia Development Ltd, graduated bachelor degree with Mathematic subject and served asaJoint Secretary of Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry (UMFCCI) until 2016.
ဦးသူရိန်အောင်သည်MAEX ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါသည်။ သူသည် MAEX ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်၏ သားဖြစ်ပြီး ၊ MAEX ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစစ်လွင်၏ သားမက်ဖြစ်သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများ အုပ်စု၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများ အုပ်စုသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်သည့် ဦးဆောင်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ အနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ရာဘာနှင်ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လက်လီရောင်းဝယ် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ လောင်စာဆီဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရေးလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် စားသောက်ကုန် အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။
ဒဂုန်အုပ်စု၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားရေး မဟာဗျူဟာများနှင့်တိုးချဲ့ရေးစီမံကိန်း တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကလွှဲပြောင်းရေးနှင့် ရယူရေးစသည်တို့ ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး ဒဂုန်အုပ်စုအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍသစ်များကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်စေသည်။သူသည် မြန်မာသီလဝါ အက် (စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ပလစ် လိမီတက် (Myanmar Thilawa SEZ Public Holdings Company) ၏ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လူနေအိမ်များ နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများကို သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း ပြီးစီးရေး အတွက် စီမံကန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။သူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို.ရှိ Westminster တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဘာသာရပ်(Business information Management in Finance) ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ကိုရရှိခဲ့သည်။
U Thurane Aung is our MAEX Director. He is currently the Chief Executive Officer of Dagon Group of Companies, which is one of the leading conglomerate in Myanmar with diversified businesses in various sectors include property development and construction, hospitality, timber, agriculture, commodity trading, plantation, retail and distribution, petroleum, automobile and food processing.
With Dagon Group he designed the business growth strategies and expansion plan he actively leads and works onanew business venture on Dagon group’s expansion into new industries in Myanmar through the establishment of new business, privatizations and acquisitions.
He also contribute much of his time for the development of the different business sectors he is in by joining the Executive Member of Myanmar Young Entrepreneur Association (MYEA). He is also Project Director of the Myanmar Thilawa SEZ Holdings company and Vice President of the Myanmar Japan Development Company Limited and Director of Myanmar Agro Exchange Public Limited.
He holdsaBachelor of Arts (BA) in Business Information Management in Finance, which he obtained from University of Westminster in the UK in 2004.
ဦးဘုန်းဘုန်းနိုင်သည်MAEX ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။သူသည် MAEX ဒါရိုက်တာ ဦးသူရိန်အောင်၏ယောက်ဖဖြစ်သည်။ သူသည်ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကို ကာလကြာမြင့်စွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းမှရရှိခဲ့သော စားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အရသာခံစားမှုများကိုသိရှိခြင်းနှင့်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း အတွေ့အကြုံများကိုယူဆောင်လာပါသည်။
Global Sky Company ကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ဂျပန်/ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖျော်ယမကာများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အမေရိကန်မှစားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာများ နှင့် ပြည်တွင်း၌စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် စာသောက်ကုန်များအထိ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
U Phone PhoneNaing is MAEX Director. He is currently the Managing Director for the Distribution arm of the Dagon Group of Companies, after years in the trading business he brought the experience of the development and refinement of the needs and taste of local consumers. Through the Global Sky Company he has engaged to expand the business portfolio into Personal Hygiene Products (from Japan/Thailand), Personal Care Products (from Philippines), Fruit &Vegetable drink (from Thailand), Food & Beverage Products (from Philippines/US) and Foodstuffs that is locally grown and manufactured.
He gained his BA in economics from Knox College, Galesburg, Illinois, United States.
ဒေါ်ခိုင်သဇင်စိုးသည်MAEX၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူမသည်အောင်နိုင်သစ္စာကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်။ သူမသည် သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြင့် သိပ္ပံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
DawKhineThazinSoe is MAEX Director. She is currently the Managing Director of AungNaingThitsar Group of Companies. Graduated Bachelor degree in Mathematics.
ဦးရဲထွတ်ဝင်းသည် MAEX ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည် ဒဂုန်အုပ်စု စက်ယန္တရား ဌာန၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့် သိပ္ပံဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည်ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဖြင့်အငြိမ်းစားယူခဲ့သူဖြစ်သည်။
U Ye Htut Win is MAEX Director. He is currently the Director for Dagon Machinery and Equipment Department. He graduatedaBachelor degree in Physics from Yangon University. Joined with Dagon International Limited in 1992, prior to joining Dagon Group he was the Army Captain and already retired.
ဦးကျော်ဇောအောင်သည် MAEX ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည် ဒဂုန်ကုမ္ပဏီအုပ်စုတွင် ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီးဒဂုန်အုပ်စု၌ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်စတင်လုပ်းကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်အများပိုင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခု ဖြစ်သည့် (MAPCO = Myanmar Agribusiness Public Corporation) မြန်မာစိုက်ပျိုးစီးပွားရေး အများပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ကနဦးတည်ထောင်သူ(Founder)ဒါရိုက်တာ အဖ့ြဲဝင်နှင့် United Group of Trading ကုန်သွယ်ရေးစုပေါင်းအုပ်စု၏ ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ သူသည် (UMFCCI = Union of Myanmar Federation of Chamber of CommerceandIndustry)ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် (MRF = Myanmar Rice Federation) မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအဖွဲ့ချုပ်ကဲ့သို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ တွင် တက်ကြွသော အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှကုန်ထုတ်ဓါတုဘာသာရပ်ဖြင့်ဂုဏ်ထူးတန်းသိပ္ပံဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သည်။ဆက်လက်၍ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဆန်ကြိတ်စက်နည်းပညာသင်တန်းကိုစာတာကေးအင်ဂျင်နီးယားရင်းလီမိတက် Satake Engineering Limited ၏ လက်အောက်တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
U KyawZawAung is MAEX Director. He is currently the Director in Dagon Group of Companies, joined Dagon Group in 1996. He also sits on the board of2public companies, Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) and United Group of Trading asarepresentative of Dagon International Ltd. He is also an active member in NGOs such as an Executive Committee Member of The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) until 2016 and Myanmar Rice Federation (MRF).
He graduated Bachelor Science in Industrial Chemistry (Hons) at Yangon University. Further, he attended the rice milling technology training in Japan under the Stake Engineering Limited.
ဦးအောင်ကြီးသည် MAEX ဒါရိုက်တာနှင့် CEO အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုတွင် ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဒဂုန်၏လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ခံဖြစ်ကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ဒဂုန်အုပ်စု၏ သစ်လုပ်ငန်းဌာနတွင်ရာထူးအမျိုးမျိုးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပစ္စည်းထောက်ပံ့သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသည်။ ဒဂုန်အုပ်စုသို့ အလုပ်မဝင်မီက သူသည် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် (၇)နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှဝါဏိဇ္ဖပညာဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
U AungGyi is also the CEO/Managing Director of MAEX. He is currently the Director in Dagon Group of Companies in charge of Dagon’s fuel distribution business, joined in 1992, he has been in nationwide logistic while serving in various position under the Timber Department in Dagon Group. Prior to joining Dagon Group he worked at the Office of Auditor General for almost7years.